Waxgaradka magaalada Laascaanood oo hadda u soo dhamaaday Kulan deg deg ah & Go’aan cad oo ay qaateen… – Puntlandtimes
Waxgaradka magaalada Laascaanood oo hadda u soo dhamaaday Kulan deg deg ah & Go’aan cad oo ay qaateen…
May 31, 2018 W LAASCAANO
LAASCAANO(P-TIMES)- Sidda uu ku waramayo Wariyaha Puntlandtimes.com ee magaalada Laascaanood kulan gaar ah oo ka socday mid kamid ah guryaha magaaladas ayaa hadda soo dhamaaday, kaas oo ay lahaayeen waxgaradka, Odayaasha & Cuqaasha magaaladaas oo ay uga hadlayaan xaaladda ay kusugan tahay magaalada iyo sidii go`aan cad loo qaadan lahaa.
Odayaasha iyo waxgaradka oo kulankoodu yahay mid qarsoodi ah, maadaama ay maleeshiyadka maamulka Hargeysa caburin iyo xabsiyaba ugu hanjabayaan waxgaradka magaalada, ayaa intii uu socday looga hadlay arrimaha ku saabsan xaaladda dagaalka ka aloosan deegaanka Tukaraq iyo gudaha Laascanaood.
Cuqaasha oo hadlay waxay cadeeyeen in mawqifkoodu mid yahay, ayna tahay in lala dagaalamo ciidamada Somaliland ee kusugan gudaha magaalada Laascaanood, isla markaasna qof kasta uu hubkiisa lasoo baxo, oo dulmiga laga dagaalamo.
In aanan la kulmin dhamaan cid kasta oo taabacsan siyaasadda maamulka Hargeysa, gaar ahaana xubnaha jooga ee kasoo jeeda gobalada Sool & Cayn ayaa kamid ah arrimaha laga wada hadlay.
In aan la ogolaan in qof dambe oo kamid ah Shacabka magaalada aan la xirin, haddii ay talaabadaas dhacdana si xoog leh loo galo xaaladda ayaa kamid ah go`aamada ay cuqaashan yeesheen.
Odayaashu waxay go`aamiyeen in maanta gudaheeda Oday kasta la hadlo ninka uga jira furimaha dagaalka ee kasoo jeeda Sool & Cayn, loona baahan yahay in uu deg deg uga baxo, cidii ku dhimata iyadoo u dagaalamaysa Somaliland aan cidna is weydiin Karin.
Dawladda Puntland ayay sheegeen in looga baahan yahay in ay dulmiga iyo dhibaatada Afduubka ah ka dulqaado shacabka magaalada, isla markaasna ay sugayaan ciidamadoodu in ay soo gaaraan, waxayna balan qaadeen in ay HIIL iyo HOOBA la garab taagan yihiin.
Wariyaha Puntlandtimes.com wuxuu sheegay in madasha intii lagu jiray khadka telfoonka ay soo galeen Isimadda beesha Dhulbahante qaar kamid ah oo ay cadeeyeen mawqifkooda, daahana ka rogeen in Laascaano ay soo gali doonaan ciidamada Puntland, sidda ugu dhaqsaha badan shacabkana looga baahan yahay in ay duliga iyo afduubka iska kiciyaan.
Go`aanka ay qaateen Waxgaradkan & kulankooduba wuxuu dhabar jab ku yahay kulan xalay ka dhacay Hotelka Xamdi ee magaalada Laascaano, kaas oo ay waxba ka soo bxii waayeen ayna ka qeybgaleen Afhayeenka baarlamaanka, Wasiiradda iyo Siyaasiin uu kamid yahay Cali Khaliif oo taageersan siyaasada Somaliland, doonayayna in ay maanta taageero u muujiyaan maamulka Hargeysa.
Riyaad ku jirtaane runta wajaha
omar derri says:
guul guul waa sax in dhulbhnte mowqif cad ka qaato dagaalka harti & isaaq kalana baxo wixii maleshiyo ah e isaaqa la safan kii diidana la habaaro in uu ku dhinto tukaraq, tuura heeryada idoorka oo erya jaariyadaha baashe, koore, c.khalif, qambi, faraton